HOMTOM HT70: ၁၀၀၀၀ mAh ဘတ်ထရီအပါးဆုံးဖုန်းဖြစ်သည် Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | ဘက်ထရီ, မိုဘိုင်း
စမတ်ဖုန်းဖန်သားပြင်များသည်ပိုမိုကြီးမားလာသည်။ ဒါကြောင့်လည်းငါတို့ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပုံကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေမှာပိုကြီးတဲ့ဘက်ထရီကိုမိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အလောင်းအစားလုပ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေရှိပေမယ့်။ HOMTOM သည်၎င်း၏ဖုန်းအသစ် HOMTOM HT70 နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏ထူးခြားသည့်ဖုန်းတစ်လုံး 10.000 mAh ကြီးမားသောဘက်ထရီ.
ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီအမှတ်တံဆိပ်ပါ ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲကြီးမားတဲ့ဘက်ထရီကိုမိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဒီစမတ်ဖုန်းကတကယ်တော့ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်ဘက်ထရီကြီးမားသည် HOMTOM HT70 ၏အမာခံများ။ သို့သော်ဖုန်းတွင်ဤမျှလောက်များစွာကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
ပြီလတစ်လလုံးတွင်ဖုန်းသည်ဈေးကွက်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ ၎င်း၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲလာမည့်ရက်သတ္တပတ်များတွင်ထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည်ပေမယ့်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီလွှတ်တင်မှုဟာအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်။ အမှတ်တံဆိပ်မှဤဖုန်းမှမည်သည့်အရာများမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
HOMTOM HT70 သည် 18:9အချိုးအစားဖန်သားပြင်များအတွက်လမ်းကြောင်းကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒီ model မှာ HD + resolution ရှိတဲ့ ၆ လက်မဖန်သားပြင်ရှိတယ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်အရောင်များကိုကြီးမြတ်ကုသမှုများအတွက်ထင်ရှား၏။ Device ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အရောင်အသွေးနှင့်ပြင်းထန်သောအရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရုပ်ပုံများတွင်သင်သည်ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည်အလွန်ပါးလွှာသောမျက်နှာပြင်များကိုရွေးချယ်လိုက်သည်။ နောက်ဘက်မှာရှိနေတုန်းက ကင်မရာနှစ်လုံး နှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ။ အခုအချိန်မှာတော့ဒီကင်မရာရဲ့ resolution နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောပါဘူး။
Battery သည်ဤ HOMTOM HT70 ၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ 10.000 mAh စွမ်းရည်နှင့်အတူ။ စမတ်ဖုန်းအတွက်အလွန်မြင့်မားသောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များစွာပေးသည်မှာသေချာသည်။ ဒါကြောင့်ဘက်ထရီကုန်သွားမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့၊ ဘက်ထရီအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းရှိပါတယ်။
ဤ HOMTOM HT70 သည်မကြာမီဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ဒီရက်သတ္တပတ်တွေတလျှောက်လုံးတယ်လီဖုန်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပိုလေ့လာလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HOMTOM HT70: စျေးကွက်၌ ၁၀၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်
အသံမှတ်စုများသည်လည်း Facebook သို့ရောက်ရှိသည်